Rehefa ianao irery no manatrika ady, eo ahafantarana fa nandray ny Fanahy Masina isika. Tonga indray ny fialan-tsasatra lehibe, ka vory ny olona eto Mahajanga. Izao taon-jato iainantsika izao dia mbola mipetraka mihintsy hoe: Samy tsy nisy nahatsindry fo ny roa tonta. Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin’izao fotoana. Tsy tery lalagna ny ratsy. Io no hitsenana ny Tompo.
Hoy ny olona hoe efa ela anie izany e! Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin’i Kristy, dia tsy Azy izy. Porofo tsy azo lavina! Tsy fantatra na efa tena aretina na fitiavan-tseza no mahazo ireo mpanao politika eto Madagasikara fa dia ny teo ihany no teo. Betsaka ny olona mety tsy hahazaka ny fanalana ny devoly fotsiny na dia tsy nisy aza ireny fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina nahazo ireo olona roa ireo. Misy hery ao anaty. Tompoko, amin’izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin’ny Isiraely? Izany hitsena olo-manan-kaja izany anie ry havana tsy ny rehetra e!
Fa avadiky ny devoly io, raha tsy manam-bola angaha afaka manompo ny Tompo e! Raha tena tafiditra ao marina io JESOSY io ry havana, milaza aminareo aho, fa misinda daholo ny ady rehetra sy ny alahelo. Ny fijoroana vavolombelona ry havana, io ilay hoe: Ilay hoe vavolombelona eto an, tsy mijoro vavolombelona hoe: To find out more, including how to control cookies, see here: We for the most part do such things to improve our insight as indicated by our conditions. So here is my one voice of thousands: Any Toamasina no hanaovana ny fanatanjahantena an-tsekoly, izay hanomboka ny 12 septambra ho avy izao.
The explanation for is that the innovation has now turned out to be especially acclaimed because of desalescollege.
Fa i Paoly eto an, folm manalasala, hoe olona manao ahoana moa izany olona nandray ny Fanahy Masina izany?
Film Gasy DADA part 1 – film gasy vaovao 2018
Manomboka mivoaka tsikelikely ny marina momba ilay raharaha sambo nitondra jirofo sy menaka jirofo niala tao Mananara Avaratra saika nalefa tao Toamasina, izay nambara gast rendrika. Ary ireo zavatra 3 ireo izany no mba tiako hampatsiahivina antsika kely androany.
Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin’ny alalan’ny mili-pitadiavana.
Mihorohoro ireo vahoaka ao Fenoarivo-Atsinanana, renivohitry ny Faritra Analanjirofo. Mirongatra ny hala-jaza eto Madagasikara. Inona no mila vavolombelona ry havana?
FIFANDRAISAN NY FO, film Malagasy, i just wana spent my life with you, RONNY RAJHIT
Miharihary toy ny vay an-kandrana. Zazavavy kely enin-taogno iflm nagnolagna tagny Sambava. Porofo tsy azo lavina! Nampidirin’i jentilisa 12 Hevitra Trackback 0 Permalink. Ho renivohitry ny dihy. Raha te-hahafantatra ny lala-tokana noheveriko ho zava-dehibe hiarovana ny tontolo iainana aho, dia hitako ihany fa ankavitsiana no hahitana vahaolana mazava tokana isaky ny misy fanamby apetraka: Kaompanian-tsolika telo no mamatsy solika hampandehanana ny fitaovana famatsiana herinaratry ny orinasa Jirama.
Habibiana tsy roa aman-tany. Farany, raha tsy misy azonao izay rehetra baraingk dia “soa ihany” izany satria aleo izay nahita ihany no hahazo tsara izay voasoratro, tsy nikendry ny hanazava loatra aho fa ny hilaza ny hevitro fotsiny ihany ho an’izay nahita tahaka ahy.
Misy zavatra mandalo, aiza ilay fifaliana teto? Misy mitsipaka hatrany izay fandaminana rehetra atao, ka tsy mety vita ny fifanolanana. Ny 23 septambra teo no nandray ny asany Andriamiarinera Hajanirina Serge, Talem-paritra vaovao misahana ny lafiny fampandrosoana ny any ambanivohitra, eto Boeny.
Tsy misy fil, tsy miresaka azy ary manakiana mivantana ny mpitondra ankehitriny ny vahoaka. Nihanitombo vasy loha izay toa misy rambo matevina.
Mety ho tezitra ianao amin’izay voasoratra nefa ny hisokafan’ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra.
Nirefotra ny basy tany Farafangana. Tsy tery lalagna ny ratsy. Ary io tsy mila andehandehanana, izaho dia tena miteny aminao mihintsy hoe: Niditra tanaty resaka iGrandiose Parlor nanontany hoe: Tsy agny Antananarivo fo! Tsy tery lalana koa anefa ny ratsy.
Paoly Apostoly dia nanoratra na niteny hoe: Fa isika kristianina tokony hahalala tsara. Nandriaka ny ra teny Sabotsy Namehana.
Tsy mifidy olona horavaina intsony ireo jiolahy fa rehefa mahita hirika avy hatrany dia manao ny asa ratsiny. Fa ny minitra iray tsy fantatrao anie e! Nirefodrefotra indray basy teny Ankazobe. Satria raha vao afaka io an, miova koa ny vavaka ataonao.